Raysal Wasaare 16 Milyan Siiyay Gabadh Uu La Haasaawayay Iyo Qaabka Loo Ogaaday Lacagtaasi - Borama News Network
Ra’iisul wasaaraha dalka Lubnaan, Sacad Al Xariiri ayaa 16 milyan oo doolar haddiyad ahaan u siiyay gabar u dhalatay dalka Koonfur Afrika oo xayaysiisa dharka hoos gashiga ah ee ay ku dabaashaan dumarka, sida uu ogaaday wargeyska The New York times.
Arrintan ayaa la ogaaday kadib markii waaxda casnhuuraha ee dalka Koonfur Afrika ay damceen inay ogaadaan halka ay lacagta ka timid, taas na ay keentay in arrinta ay maxkamad tagto.
Wargeyska ayaa waraaqo uu ka helay maxkamad ku taala dalka Koonfur Afrika waxaa uu ku ogaaday in gabadhan ay horay u sheegtay in xirir haasaawa uu ka dhaxeeyay iyada iyo Sacada Al Xariir, kadib markii ay ku kulmeen goobo loo dalxiis tago oo ku yaala jasiiradda Seychelles.
Ra’iisul wasaare Sacad Al Xariir ayaa xiliga uu lacagta siinayay Ms. Van der Merwe waxaa la sheegay in uusan wax xil ah heynin, waxaana sidoo kale la sheegay inay ahayd 2013-ka. Lacagta uu siiyay gabadha ayaa sidoo kale la sheegay in aysan waxba ku jabneyn oo uusan jabinin sharciyada u degsan dalalka Lubnaan iyo Koonfur Afrika.
Ms. van der Merwe ayaa xiligaas ahayd 20 sano jir, oo waxay kusoo caan baxday xayeysiis ay u sameyeysay shirkad sameysa cabitaanka.
Lacagta ay heshay gabadhan ayaa la ogaaday, kadib markii waaxda canshuraha ee dalka Koonfur Afrika ay damceen inay canshuuraan lacagta lagu arkay akoonka bangigeeda, hasayeeshee Ms. van der Merwe ayaa ku dooday in lacagtaas ay tahay haddiyad, oo aysan ahayn in la canshuuro.
“Waan ku jeclahay, Sacadkeygi:),” ayay Van der Merwe ku tiri farriin ay u dirtay, kadib markii ay u gudbisay akoonka bangiga loogu soo shubayo lacagta, si ay guryo iyo alaabo kale ugu iibsato. Lacagta ayaa isla markiiba markiiba kusoo dhacday akoonka gabadha.
Wargeyska The New York Times oo qoray warbixintan ayaa isku dayay in uu xiriiro Van der Merwe, si ay wax uga weydiiyaan arrintan, balse waalidkeeda iyo qareenkeeda oo ku matalay maxkamadda ayaa ka gaabsaday inay arrintan ka hadlaan.
Ms. Van der Merwe ayaa maxkamadda ka hor cadeysay in iyadoo 19 jir ah ay u safri jirtay meelaha caanka ah ee loo dalxiis tago, oo ay kamid tahay goob loo dalxiis tago oo ku taala jasiiradda Seychelles, halkaas oo ay aad u boqdaan dadka hantida leh oo aysan lacagta agtooda waxba ka ahayn.
Markii dowladda Koonfur Afrika ay gabadha wax ka weydiisay halka ay ka keentay lacagta ayaa waxay sheegtay inay tahay hadiyad ay ka heshay saaxiibkeed, lacagtaas na ay ku iibsatay qasri ku yaala magaalada Cape Town. Sidoo kale lacag dhan 2.7 milyan oo doolar ayay amaahisay shirkad ka shaqeysa dhismaha oo uu aabaheed wax ka leeyahay.
Sacad Al Xariiri kama uusan jawaabin warbixintan uu qoray wargeyska, waxaana kooxda u qaabilsan dhanka warbaahinta ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintan.
Sacad Al Xariiri oo xiriir la leh dalalka Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ah ra’iisul wasaaraha dalka Lubnaan ee suniga ah, kana mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan dalkaas, waxaan hantidiisa lagu qiyaasay lacag dhan 1.9 bilyan oo doolar.
WAR DEG DEG AH: Qodobada Heshiiska Turkiga iyo Maraykanka ee Waqooyiga Suuriya
Oday cabdule oo la weeraray Ugana Waramay Xertiisa KALA-MAAN Waxa Qabsaday
Bnnstaff October 9, 2019 October 9, 2019